Umaki: isu levidiyo | Martech Zone
Umaki: isu levidiyo
Ngale nkinga yamanje, ochwepheshe bebhizinisi bazithola behlukanisiwe futhi besebenza ekhaya, bencike kumasu wevidiyo wezingqungquthela, izingcingo zokuthengisa, nemihlangano yethimba. Njengamanje ngizihlukanisa ngeviki elilandelayo kusukela umngani wami evezwe kothile othole ukuthi une-COVID-19, ngakho-ke nginqume ukuhlanganisa amanye amathiphu wokukusiza ukuthi usebenzise ividiyo kangcono njengendawo yakho yokuxhumana. Amathiphu Evidiyo Ehhovisi Lasekhaya Ngokungaqiniseki komnotho,
Ngo-2017, ukuthengiswa kwe-ecommerce kulinganiselwa ukuthi kufinyelela ku- $ 434 billion e-United States. Besilokhu sakha leli sayithi ukwengeza ezinye izixazululo namasu we-ecommerce ngemuva kokuhlola ezinye izixazululo zokubika ezizenzakalelayo ngonyaka odlule. Kuningi okuzayo ezinyangeni ezimbalwa ezizayo - siyathembisa! Amapulatifomu e-Ecommerce athuthukise le infographic ngamasu we-ecommerce azokusiza ukuthi uthuthukise ibhizinisi elizinzile futhi ugxile kokufanele ukwenze ukuze uphumelele, kusukela ekuqondiseni